admin – Page 8 – Shabakadda Amiirnuur
Ciidamada Ugandheys ah oo la dilay iyo Ciidamada Puntland oo la duqeeyay.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa duqeymo ka kala fuliyay Garoonka diyaarahada ee Magaalada Baraawe ee Gobalka Shabeelaha hoose iyo Fariisin Ciidamada Puntland ku leeyihiin Gobalka Bari. Shalay gelinkii dambe ayay Ciidamada Alshabaab waxay duqeyn la beegsadeen diyaarad Sahay u siday Ciidamada Uganda oo ku isku dayaysay in ay ka caga […]
Daawo,Dhegeyso; Bulshada Ceelbuur oo difaacday Nabi Muxamad (SCW)
Bulshada ku dhaqan Magaalada Ceelbuur ee Gobalka Galgaduud ayaa muujiiyay sida ay uga careysan yihiin Aflagaadadii Faransiisku u geystay Nabi Muxamad (SCW), Bulshada waxay sheegeen in ay ka go’an tahay in ay difaacaan Nabiga (SCW) oo ay ka go’an tahay in ay naftooda u huraan isla markaana ay qaadayaan tlaabao […]
Dhegeyso Alshabaab oo hadashay Weerarada Dhuuso Marreeb iyo Gendershe.
Xarakada Shabaabul Mujaahdiin ayaa ka war bixisay howl galo ay ka kala fulisay Deeganka Gendershe ee Gobalka Shabeelaha hoose iyo duleedka Magaalada Dhuuso marreeb Xarunta Gobalka Galguud. Afhayeenka dhanka Ciidamada ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegtay in Qarax nafhurnimo oo ka dhacay Meel u dhaw Deegaanka gendershe ay ku dileen […]
Sawiro Khasaare Xoog Leh Oo Maraykanka Iyo Ciidamada Uu Ku Shaqeysto Lagu Gaarsiiyay Istish-Haadiyo Ka Dhacday Shabeelaha Hoose
askari Maraykan ah iyo afar Soomaali ah oo oo Maraykanka u daacad ahaa kana tirsan Ciidamada la yiraahdo Alpha Group ayaa ku dhintay 4 kale oo mid Maraykan yahayna waa ku dhaawacmeen kadib marki qarax nafhurnimo Xalay lagula beegsaday Deegaan Xeebeedka Gendershe ee Gobalka Sheebalaha hoose. Ciidamadaan oo watay diyaarad […]
Askar ka tirsan Dowladda federalaka ah o lagu laayay duleedka Dhuuso marreeb iyo kuwo Jabuutiyaan ah oo lagu dhaawacay.
Dagaal xoog leh ayaa Maanta ka dhacay Meel u dhaw Magaalada dhuuso marreeb kaasoo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsaday. Ugu yaraantii sideed ka tirsan Ciidamada Dowladda Federaalka ah ayaa maanta ka lagu dilay duleedka Magaalada Dhuuso Marreeb ee Gobaka Galgaduud kadib dagaalkaan dhacay oo u muuqday mid ababaabulan. […]
Maraykanka oo Khasaare lagu gaarsiiyay gudaha Soomaaliya kadib qarax Nafhurnimo.
Ugu yaraan hal askeri oo Maraykan ah ayaa dhintay mid kalena waa dhaawacmay kadib qarax nafhurnimo oo xalay lagula beegsaday Deegaan Xeebeedka Gendershe ee Gobalka Shabeelaha hoose. Sidoo kale waxaa goobta ku dhintay afar askeri oo kuwa Maraykanku ku shaqeysto ee Soomaalida ah ka mid ahaa iyadoo sadax kalena dhaawacyo […]
Daawo dhegeyso Jilib oo si adag looga difaacay Nabi Muxamad (SCW)
isu soo bax Balaaran oo lagu difaacayay Nabi Muxamad (SCW) ayaa ayaa ka dhacay Magaalada Jilib ee Wilaayada Jubbooyinka kana mid ah dhulka ay ka taliso Xarakada SHababaul Mujaahidiin oo Maamusho dhul baarlan ooka tirsanDalka Soomaaliya. dadka waxaa ka soo dhex muuqday Saraakiil ka tirsan Xarakada Alshabaab oo uu […]
Dilal iyo weeraro ka dhacay gudaha dalka
Laba askeri oo ka tirsanaa Dowladda federaalka ah ayaa Maanta lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa fuliyay howlgal u muuqday mid qorshaysan oo dhegta dhiiga looga duray askartaan ka tirsan Dowladd Federaalka ah ee wada shaqeynta la leh Ciidamada Shisheeye. Sidoo […]
Al Shabaab oo bogaadiyay Weeraradii lagu difaacayay Nabiga SCW ee ka dhacay Faransiiska [Bayaan].
Bayaan kasoo baxay hoggaanka sare ee Xarakat Ash-Shabaab Al-mujaahidiin ayaa lagu bogaadinayo Camaliyaadka halyeynimo ee lagu difaacayo Sharafka Nabi Muxamd SCW. Bayaanka kasoo baxay Al Shabaab oo ku qornaa luqadaha Carabiga iyo English-ka ayaa si aad ah uga hadlay waajibnimada difaaca nabiga SCW. Waxay mahad oo dhan u sugnaatay Allihii […]
Maxaa Cusub Muxaadaraad Wararka Gudaha
Dhegeyso ; isu soo bax Nabiga (SCW) lagu difaacayay
Bulshada ku dhaqan Magaalada Teyeegloow ee Gobalka Baay ayaa Muujiyay shucuurtooda la xariirta sida ay uga xun yihiin Aflagadada Gaalada Faransiisku u geyseen Nabi Muxamad (SCW). Isu soo baxa ka dhacay Tayeeglow oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan Bulshadu waxay hoosta ka xariiqeen in ay ka go’an tahay […]
« Previous 1 … 6 7 8 9 10 … 272 Next »